Madaxweyne kuxigeen Camay oo gaaray Buuhoodle iyo diyaargaroowga difaaca jiidda Buuhoodle (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweyne kuxigeen Camay oo gaaray Buuhoodle iyo diyaargaroowga difaaca jiidda Buuhoodle (dhegayso)
Maajo 30, 2018 6:14 g 0
Deegaanka Xamar-lagu-xidh ee gobolka Cayn waxaa galabta lagu soo dhoweeyey Madaxweyne Kuxigeenka dawladda Puntland, Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey oo booqasho dhawr maalmood ah uga bilaabatay gobolka Cayn.
Camey waxa uu caawa u hoydey Buuhoodle, waxa uuna kulamo qorshaysan la leeyahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka. Socdaalka Madaxweyne Kuxigeen Camay ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu la xiriiro iskudubbaridka ciidamada difaaca Gobolka Cayn iyo kala warqaadashada taliyayaasha ciidamadda difaaca Puntland ee deegaanka Cayn.
Biloowga sannadkii 2011 ayaa Somaliland waxa ay soo weerartay Gobolka Cayn, aagagga Kalshaale, Hagoogane iyo Jiidda Buuhoodle. Isla saanadkaas waxa ay Somaliland xasuuq ba’an ka gaysatay deegaanka Kalshaale.
Ciidamada Difaaca Puntland ee aagga Buuhoodle oo si toos ah u caabiyey weerarka Somaliland ayaa wararka waxa ay intaas ku darayaan in ay hadda u diyaargaroobayaan weerar kale oo kaga yimaada Somaliland, lana xiriira dagaalka jiidaha Sool, ahna sababta Madaxweyne Kuxigeen Camey uu socdaal ugu marayo Buuhoodle iyo deegaano kamid ah gobolka Cayn.
Warbixintaan waxaa Daljir Buuhoodle nooga soo direy Iid Maxamed Cabdi.
Taalada xasuuqii Kalshaale hoos ka daawo
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17305
Madaxweyne Farmaajo oo wada hadallo la yeeshay Madaxweyne Kenyatta (Sawiro)
Odayaasha Gurtida Cabudwaaq oo kabaxay Maamulka Galmudug (dhegayso)